Description/subject: "The UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMRs) were initially adopted by the UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders in 1955, and approved by the UN Economic and Social Council in 1957. On 17 December 2015arevised version of the Standard Minimum Rules were adopted unanimously by the 70th session of the UN General Assembly in Resolution A/RES/70/175; (see PRI’s press release). This followedafour-year revision process aftera2010 UN General Assembly resolution which requested revision of the SMRs ‘so that they reflect recent advances in correctional science and best practices’. Find out more on the revision process. The revised Rules will be known as the ‘Nelson Mandela Rules‘ to honour the legacy of the late President of South Africa, Mr. Nelson Rolihlahla Mandela, who spent so many years of His life in prison’...." KEYWORDS: PRISONER TREATMENT, CRIME PREVENTION, CRIMINAL JUSTICE, CONFERENCES, DOCUMENTATION, INTERNATIONAL DAYS, WOMEN PRISONERS, DETAINED JUVENILES, NON-CUSTODIAL SANCTIONS, TECHNICAL COOPERATION, RESOURCES ALLOCATION, INFORMATION DISSEMINATION, ADMINISTRATION OF JUSTICE, TRAINING PROGRAMMES
Title: မြန်မာ- အခွင့်အရေးများ ထောင်တွင်းသို့ ဆောင်ကျဉ်းပေး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျဉ်းထောင်များ ဥပဒေမူ�
Description/subject: ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင် အကျဉ်းထောင်များ ဥပဒေမူကြမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် “ရပ်ရွာအေးချမ်း သာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး”၊ “မှုခင်းထပ်မံ မကျူးလွန်စေရန် ကာကွယ်ရေး”၊ အကျဉ်းသားများအား ပြစ်ဒဏ်မှ လွတ်မြောက်ပြီးသောအခါ ထိုက်သင့်သော အသက်မွေးမှု ပညာရပ်များ သင်ကြားတတ်မြောက်စေရန် အတွက် အဓိကရည်ရွယ်လျက် တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ဤအကျဉ်းထောင်များ ဥပဒေမူကြမ်းမှာ ခေတ်နှင့် မလျော်ညီတော့သော အကျဉ်းထောင်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဥပဒေမူဘောင်များဖြစ်သည့် ၁၈၉၄ ခုနှစ် အကျဉ်းထောင် အက်ဥပဒေ၊ ၁၉၀၀ ခုနှစ် အကျဉ်းသားများ အက်ဥပဒေ နှင့် ၁၉၂၀ အကျဉ်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း အက်ဥပဒေ တို့ကို ပယ်ဖျက်ပြီး အစားထိုးမည့် ဥပဒေမူကြမ်း ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ ဥပဒေပိုင်းအရကြိုးပမ်းမှုကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့က ကြိုဆိုပါသည်။ ပြည့်စုံသော၊ အသေးစိတ်ကျသော၊ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးဥပဒေ စံညွန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော အကျဉ်းထောင်များ ဥပဒေတစ်ရပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျဉ်းသားများအားထိန်းသိမ်းချုပ်နှောင်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အရေးပါသော နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သိုသော် ယခုထွက်ရှိလာသော လူထုကိုချပြသည့် ဥပဒေမူကြမ်းသည် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် များစွာ ဝေးကွာနေပါသေးသည်။ လွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံး၍ အကျဉ်းကျခံနေရသောသူများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ပြဌာန်းချက်များစွာ ကျန်ရှိနေသေးကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ယခု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့က တင်ပြမည့် အသေးစိတ် ဆန်းစစ်လေ့လာချက်တွင် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီစွာ အကျဉ်းထောင်များဥပဒေကို မည်ကဲ့သို့ပြင်ဆင်သင့်သည်ဆိုသော တိကျသည့် အကြံပြုချက်များကို ဖေါ်ပြထားပါသည်။ လက်ရှိ ဆန်းစစ်ချက်မှာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အခြားသော အစိုးရ အာဏာပိုင်များ၊ လူ့အသိုင်းအဝန်းအတွက် လှုပ်ရှားကြသူများ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျဉ်းထောင် စနစ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် ကြိုးပမ်းနေကြသူတို့အတွက် အသုံးဝင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။
Title: MYANMAR: BRING RIGHTS TO PRISONS - AMNESTY INTERNATIONAL’S RECOMMENDATIONS ON THE DRAFT PRISONS LAW
Description/subject: "In July 2015adraft Prisons Law was introduced in Myanmar’s Parliament, with the objective to “safeguard peace in the community and the rule of law”; prevent “repeat offending”; and provide for the rehabilitation of prisoners withaview to their release. The draft Prisons Law is set to replace Myanmar’s outdated legal framework on prison conditions by repealing the 1894 Prisons Act, the 1900 Prisoners Act and the 1920 Identification of Prisoners Act. Amnesty International welcomes this legislative initiative. A prisons law which is comprehensive, detailed, and fully in line with international human rights law and standards will be an important tool to improve conditions of detention in Myanmar. However, the latest draft made available to the public falls far short of international standards. It fails to includeanumber of provisions necessary to protect the rights of people deprived of their liberty. In this detailed legal analysis, Amnesty International makes specific recommendations as to how the draft Prisons Law should be amended to bring it in line with international human rights law and standards. We hope that this analysis will prove to be useful to parliamentarians, other government officials, civil society actors, and others working on the reform of Myanmar’s prison system..."
Title: Prison Reforms must respect human rights - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် ၁၀ နိုဝင်�